Sunday May 08, 2022 - 14:21:06
Dumarka Afghanistan ayaa xuquuqdooda oo kaamil ah ka helaya shareecada Islaamka
Imaarada islaamiga ah ee Afqaanistaan ayaa dalka waxay kusoo rogtay awaamiir sharci ah oo ka dhigan tadbiqiinta Shareecada Islaamka.
Wasaaradda Al-Amru bil Macruuf wan Nahyi canil Munkar ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in wixii xilligan ka dambeeya ay haweenka dalka Afqaanistaan ku nool ku amranyihiin iney qaataan xijaabka sharciga ah ee uu Allaah cazza wajalla ku waajibiyay Quraanka kariimka.
Wasiirka wasaaradda farida macruufka iyo reebida munkarka oo qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay in diinta Islaamka ay tahay diinta keliya ee sharaftay haweenka, xaqqa ay siiseyna aaaney jirin diin kale oo siisay haweenka.
" Waxana dooneynaa in gabdhaha walaalaheena ah ku noolaadaan dhowrsanaan iyo karaamo, xuquuqda uu Islaamku siiyay haweenkana ma jirto diin kale oo siisay. Wixii maanta ka billowda xijaabka sharciga ah ayay qaadanayaa haweenka, ciddii diidana dardaaran ayaan siineynaa, dadka masuulka ka ah haweenkaas ayaana u yeereynaa” ayuu yiri wasiirka Al-Amru bil Macruuf wan Nahyi canil munkar ee Imaarada islaamiga ah ee Afqanaistaan.
Wuxuu intaa sii raaciyay " Usuusha iyo Axkaamta Islaamka ayaa anaga nooga muhiimsan wax weliba, wax welibana waan ka gudbi karnaa, laakiin kama tallaabsan hal xukun oo kamid ah axkaamta diinta”.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in Imaaradu aaney awood u lahayn iney bedesho kitaabka Allaah, wax uu Allaah ka dhigay waajibna ka dhigaan suno, ama wax uu Alle sunno ka dhigeyna ka dhigaan waajib, ama wax uu Allaah xarrimey xalaal ka dhigaan, ama wax uu Allaah xalaal ka dhigay xaaraam ka dhigaan.
Dabiixullaahil Mujaahid, wakiilka wasaaradda Warfaafinta ee IMaarada islaamiga ah oo isagana goobjoog ahaa shirka jaraa’id ayaa sheegay in haweenka muslimaadka ay la gudboontahay iney qaataaan awaamiirta Allaah, oo aysanaan banaanka usoo bixin iyagoo aan xijaabneyn.
Dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda Waxbarashada ee Imaarada islaamiga ah wareegto ay soo saartay ku sheegaty in la joojiayay in haweenka iyo ragga dhigta jaamacadaha ay isku xiisad noqdaan, taas bedelkeedana saddex maalin gaar looga dhigay fasallada waxbarashada gaar looga dhigay haweenka, halka saddex maalin oo kelana loo gaar yeeley ragga.
Dhamaan tallaabooyinkan ayaa qeyb ka ah tadbiiqinta Shareecada Islaamka oo laga hirgeliyay dalka Afqaanistaan, kadib markii dalka Jihaad looga saaray ciidamadii Shisheeyaha iyo xukuumaddi iyagu ka dhiseen magaalada Kaabul.
Taliban oo mamnuucday TIKTOK Markii ay sheegtay inuu Habaabiyey Dhalinta Reer Afghan.
Diyaaradaha dowladda Pakistan oo 42 qof shacab ah ku xasuuqay Afghanistan [Warbixin].
Maxamuud Sayid Aadan oo saadaaliyay in Soomaaliya uu ka dhici doono isbedel kamid ah midka Afghanistan.
Imaarada Islaamiga ah oo dalka Afghanistan ka mamnuucday Beerista Xashiish-ka.
Imaarada Islaamiga Afghanistan oo ku dhawaaqday in berri ay tahay 1da Ramadaan.